ရာသီသှေးနှငျ့ သငျ့ကနျြးမာရေး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရာသီသှေးဆိုတာ.. မိနျးကလေးတဈယောကျ အပြိုဖျော ဝငျခြိနျကစလို့… ရာသီသှေးဆုံးပီးခြိနျထိ.. အမွဲ ကွုံတှနေ့ရေမယျ့
ဒီတော့ ဒီလို ရာသီသှေး ဆငျးရာမှာ မြားခွငျး နညျးခွငျးနဲ့ လိုကျပွီး သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးအပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှုအကွောငျး ပွောပွခငျြပါတယျ…
အမြားစုကတော့ ရာသီသှေး ဆငျးခါနီးခြိနျမှာ.. စိတျအလိုမကခြွငျး၊ဝမျးနညျးခွငျး၊ ဒေါသ ထှကျခွငျး ၊ နာကငျြ ကိုကျခဲခွငျး စတာတှကွေုံရတယျ.. ဒီလိုသိထားကွပါမယျ.. သို့သျော ရာသီသှေးဆငျးတာ မြားလား နညျးလား… ပုံမှနျ cycle ဝနျးကငျြလား ..အရောငျ ကှဲပွားမှုရှိလား စသညျဖွငျ့တော့ သတိထားမိလေ့ မရှိကွပါဘူး…
ပုံမှနျအားဖွငျ့.. အမြိုးသမီးတဈယောကျ ရာသီသှေးဆငျးခြိနျဟာ… လေး ငါး ရကျ ဝနျးကငျြ(အမြားဆုံး ၈ ရကျ) မှာ ဖွဈပါတယျ.. ရာသီသှေးပမာဏဟာ ရာသီတဈခုမှာ 5ml -80ml (5ml = 1 teaspoon) လောကျ ဆငျးလရှေိ့ပါတယျ…
အကယျ၍ 80 ml ထကျ ကြျောသှားရငျတော့ ရာသီသှေးဆငျးမြားခွငျးလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ.. ဒီလိုအမြိုးသမီးတှမှော သှေးအားနညျးတဲ့ လက်ခဏာ ၊ သံဓာတျခြို့တဲ့သော လက်ခဏာတှေ တှရေ့တတျပါတယျ..
ဒွါ့ပငျ ရာသီသှေးဆငျးခွငျးဟာ.. အပြိုဖျောဝငျပီးကာစ ၊ မီးဖှားပီးကာစနဲ့ သှေးဆုံးကာနီးအခြိနျတှမှော မမှနျတတျတာကလှဲလို့.. ကနျြကာလမြားမှာ ၂၈ရကျ ဝနျးကငျြမှာ ရာသီတဈခုဖွဈပါတယျ. သို့သျော တဈယောကျခငျြးစီနဲ့ လိုကျပွီး အခြိနျကှာဟမှုတော့ ရှိပါတယျ..
မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ.. အမြိုးသမီးတဈယောကျစီမှာ ရာသီသှေးဆငျးခြိနျဟာ အမွဲလို ပုံမှနျ ဖွဈနပွေီး ပမာဏဟာလညျး ပုံမှနျ ဖွဈဖို့ အဓိက ကပြါတယျ..
ဒီတော့ကာ ရာသီသှေးဆငျးမြားခွငျး နညျးခွငျးကို ဘယျလို တိုငျးတာပွီး သိရှိနိုငျမလဲ…
ယဘေုယအြားဖွငျ့ Tampon တဈခုဟာ 3ml (အမြားဆုံး12ml)ပမာဏ စုပျယူနိုငျပွီး
Pad တဈခုဟာ 5ml(အမြားဆုံး10-15ml) လောကျ စုပျယူနိုငျပါတယျ..ဒီတော့ သငျဟာ တဈနတေ့ညျးမှာ နှဈနာရီ သုံးနာရီလောကျ ခွား တဈခု အသဈတဈခု လဲလှယျနနေရေပွီးဆိုရငျ.. သငျ့ရာသီသှေးဟာ မြားနတောကို ပွနပေါတယျ…
အရှယျရောကျပွီး အမြိုးသမီးတှမှော ရာသီသှေးဆငျးမြားတာမြိုး တဈခါတဈရံ ကွုံရနိူငျပါတယျ… သှေးခဲသှေးစလေးတှပေါလာတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ.သို့သျော ရာသီကုနျခါနီးရကျမှာ ပုံမှနျကဲ့သို့ ပွနျလညျဖွဈသှားတတျပါတယျ.. သို့သျော ရာသီသှေးဆငျးတာ ပုံမှနျတတျ ရကျကွာနတော၊ သှေးရောငျ ပွောငျးလဲသှားမှု မရှိတာ၊ ပိုမိုနာကငျြကိုကျခဲတာတှေ ဖွဈပါက ဆရာဝနျနဲ့ ပွသသငျ့ပါတယျ..
အပြိုဖျောဝငျကာစ အမြိုးသမီးတှမှော ရာသီသှေးဆငျးပွီး လမှ စပွီး လအနညျးငယျ ရာသီသှေးပုံမှနျ မဆငျးတတျတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ.. ဒါဟာ ပုံမှနျပါ.. နောကျပိုငျးကာလတှမှော… တဈသတျမှတျတညျး ဖွဈသှားပါတယျ…
ဒါပွငျ.. သန်ဓတေားဆေး အသုံးပွုသူတှမှော.. ရာသီမမှနျတာ.. တခြို့သူတှမှော ရာသီသှေးလုံးဝ မဆငျးတာမြိုး ဖွဈတာပါတယျ… အထူးသဖွငျ့ progestin only အသုံးပွုတဲ့သူတှမှော ပိုတှရေ့တတျပါတယျ…သားအိမျထဲ ထညျ့ ပစ်စညျး အသုံးပွုသူတှမှော ဒီလိုရာသီမမှနျတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ..
အမြိုးသမီး တဈယောကျခငျြးစီနဲ့ လိုကျပွီး သခြောရှငျးလငျးပွဖို့ရာမလှယျကူတာမို့ အကယျ၍.. မိမိဟာ သာမနျထကျ သှေးဆငျးနတေယျလို့ ခံစားနရေပါက… ဆရာဝနျနှငျ့ သခြောဆှေးနှေးတိုငျပငျသငျ့ပါတယျ…
ကနျြးမာလှပပွီး ပြျောရှငျသော အမြိုးသမီးမြား ဘဝကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ..
ရာသီ​သွေးဆိုတာ.. မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ အပျို​ဖော်​ ဝင်​ချိန်​ကစလို့… ရာသီ​သွေးဆုံးပီးချိန်​ထိ.. အမြဲ ကြုံ​တွေ့​​နေရမယ့်​
ဒီ​တော့ ဒီလို ရာသီ​သွေး ဆင်းရာမှာ များခြင်း နည်းခြင်းနဲ့ လိုက်​ပြီး သင့်​ရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးအ​ပေါ် အကျိုးသက်​​ရောက်​မှုအ​ကြောင်း ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
အများစုက​တော့ ရာသီ​သွေး ဆင်းခါနီးချိန်​မှာ.. စိတ်အလိုမကျခြင်း၊ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ​ဒေါသ ထွက်​ခြင်း ၊ နာကျင်​ ကိုက်​ခဲခြင်း စတာ​တွေကြုံရတယ်​.. ဒီလိုသိထားကြပါမယ်​.. သို့​သော်​ ရာသီ​သွေးဆင်းတာ များလား နည်းလား… ပုံမှန်​ cycle ဝန်းကျင်​လား ..အ​ရောင်​ ကွဲပြားမှုရှိလား စသည်​ဖြင့်​​တော့ သတိထားမိ​လေ့ မရှိကြပါဘူး…
ပုံမှန်​အားဖြင့်​.. အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ ရာသီ​သွေးဆင်းချိန်​ဟာ… ​လေး ငါး ရက်​ ဝန်းကျင်​(အများဆုံး ၈ ရက်​) မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​.. ရာသီ​သွေးပမာဏဟာ ရာသီတစ်​ခုမှာ 5ml -80ml (5ml = 1 teaspoon) ​လောက်​ ဆင်း​လေ့ရှိပါတယ်​…
အကယ်​၍ 80 ml ထက်​ ​ကျော်​သွားရင်​​တော့ ရာသီ​သွေးဆင်းများခြင်းလို့ သတ်​မှတ်​နိုင်​ပါတယ်​.. ဒီလိုအမျိုးသမီး​တွေမှာ ​သွေးအားနည်းတဲ့ လက္ခဏာ ၊ သံဓာတ်​ချို့တဲ့​​သော လက္ခဏာ​တွေ ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​..
ဒြါ့ပင်​ ရာသီ​သွေးဆင်းခြင်းဟာ.. အပျို​ဖော်​ဝင်​ပီးကာစ ၊ မီးဖွားပီးကာစနဲ့ ​သွေးဆုံးကာနီးအချိန်​​တွေမှာ မမှန်​တတ်​တာကလွဲလို့.. ကျန်​ကာလများမှာ ၂၈ရက်​ ဝန်းကျင်​မှာ ​ရာသီတစ်​ခုဖြစ်​ပါတယ်​. သို့​သော်​ တစ်​​ယောက်​ချင်းစီနဲ့ လိုက်​ပြီး အချိန်​ကွာဟမှု​တော့ ရှိပါတယ်​..
မည်​သို့ပင်​ဆို​စေကာမူ.. အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​စီမှာ ရာသီ​သွေးဆင်းချိန်ဟာ အမြဲလို ပုံမှန်​ ဖြစ်​​နေပြီး ​ပမာဏဟာလည်း ပုံမှန်​ ဖြစ်​ဖို့ အဓိက ကျပါတယ်​..
ဒီ​တော့ကာ ရာသီ​သွေးဆင်းများခြင်း နည်းခြင်းကို ဘယ်​လို တိုင်းတာပြီး သိရှိနိုင်​မလဲ…
​ယေဘုယျအားဖြင့်​ Tampon တစ်​ခုဟာ 3ml (အများဆုံး12ml)ပမာဏ စုပ်​ယူနိုင်​ပြီး
Pad တစ်​ခုဟာ 5ml(အများဆုံး10-15ml) ​လောက်​ စုပ်​ယူနိုင်​ပါတယ်​..ဒီ​တော့ သင်​ဟာ တစ်​​နေ့တည်းမှာ နှစ်​နာရီ သုံး​နာရီ​လောက်​ ခြား တစ်​ခု အသစ်​တစ်​ခု လဲလှယ်​​နေ​နေရပြီးဆိုရင်​.. သင့်​ရာသီ​သွေးဟာ များ​နေတာကို ပြ​နေပါတယ်​…
အရွယ်​​ရောက်​ပြီး အမျိုးသမီး​တွေမှာ ရာသီ​သွေးဆင်းများတာမျိုး တစ်​ခါတစ်​ရံ ကြုံရနိူင်ပါတယ်​… ​သွေးခဲ​သွေးစ​လေး​တွေပါလာတာမျိုး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​.သို့​သော်​ ရာသီကုန်​ခါနီးရက်​မှာ ပုံမှန်​ကဲ့သို့ ​ပြန်​လည်ဖြစ်​သွားတတ်​ပါတယ်​.. သို့​သော်​ ရာသီ​သွေးဆင်းတာ ပုံမှန်​တတ်​ ရက်​ကြာ​နေတာ၊ ​သွေး​ရောင်​ ​ပြောင်းလဲသွားမှု မရှိတာ​၊ ပိုမိုနာကျင်​ကိုက်​ခဲတာ​တွေ ဖြစ်​ပါက ဆရာဝန်​နဲ့ ပြသသင့်​ပါတယ်​..
အပျို​ဖော်​ဝင်​ကာစ အမျိုးသမီး​​တွေမှာ ရာသီ​သွေးဆင်းပြီး လမှ စပြီး လအနည်းငယ်​ ရာသီ​သွေးပုံမှန်​ မဆင်းတတ်​တာမျိုး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​.. ဒါဟာ ပုံမှန်​ပါ.. ​နောက်​ပိုင်းကာလ​တွေမှာ… တစ်​သတ်​မှတ်​တည်း ဖြစ်​သွားပါတယ်​…
ဒါပြင်​.. သ​န္ဓေတား​ဆေး အသုံးပြု​သူ​တွေမှာ.. ရာသီမမှန်​တာ.. တချို့သူ​တွေမှာ ရာသီ​သွေးလုံးဝ မဆင်းတာမျိုး ဖြစ်​တာပါတယ်​… အထူးသဖြင့်​ progestin only အသုံးပြုတဲ့သူ​တွေမှာ ပို​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​…သားအိမ်​ထဲ ထည့်​ ပစ္စည်း အသုံးပြုသူ​တွေမှာ ဒီလိုရာသီမမှန်​တာ​တွေ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​..
အမျိုးသမီး တစ်​​ယောက်​ချင်းစီနဲ့ လိုက်​ပြီး ​သေချာရှင်းလင်းပြဖို့ရာမလွယ်​ကူတာမို့ အကယ်​၍.. မိမိဟာ သာမန်​ထက်​ ​သွေးဆင်း​နေတယ်​လို့ ခံစား​နေရပါက… ဆရာဝန်​နှင့်​ ​သေချာ​ဆွေး​နွေးတိုင်​ပင်​သင့်​ပါတယ်​…
ကျန်းမာလှပပြီး ​ပျော်​ရွှင်​​သော အမျိုးသမီးများ ဘဝကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​..